Izikhungo Zokuhlanzisisa - Izithasiselo zeCofttek
ILuohe Hengfei Biological Technology Co, Ltd., etholakala ngonyaka ka-2008, ibhizinisi lobuchwepheshe obusezingeni eliphezulu lokuhlanganisa ukukhiqiza, i-R & D nokuthengisa. Itholakala eLuohe Chemical Industry Park, ezibophezele ocwaningweni nasekuthuthukisweni komkhakha wezemithi othuthukile, ukuhlinzeka ngemikhiqizo emisha nezinsizakalo ezisezingeni eliphakeme embonini yezemithi.
I-Hengfei Biotechnology inesipiliyoni esinamandla se-biotechnology, ubuchwepheshe bamakhemikhali nokuhlolwa kokuhlaziya, kugxile ekuthuthukiseni ama-API, izixhumanisi nama-chemical amakhemikhali, ngenkathi inikeza ikhwalithi ephezulu ye-CRO, amasevisi we-CMO nokuhlolwa kokuhlaziya kanye nezinsizakalo zokucwaninga ngekhwalithi ezinkampanini yezolimo.
IHengfei Biotechnology ineqembu labaphathi abanolwazi neqembu lokuqala le-R & D, kufaka phakathi ochwepheshe abaningi abavelele emkhakheni wokuthuthukiswa kwenqubo yokwenziwa kwemithi kanye nocwaningo lwekhwalithi yezemithi. Kuyaziwa futhi kunokuncintisana okubalulekile kule mikhakha yezemithi yokwenziwa kwamakhemikhali, ubuchwepheshe bokwenza izinto, ukuthuthukiswa kwezidakamizwa, ukwenziwa kwezinto eziphilayo, njll. neChina.
Ukuphikelela esimisweni esithi "Quality Quality, Customer First, Service Honest, Mutual Benefit", i-Hengfei Biotechnology Co., Ltd inikeza amakhasimende ngemikhiqizo eyanelisayo ngokusebenzisa ukuhlolwa okuphelele kanye nenkonzo ephezulu.
Ngethemba ngobuqotho ukusebenzisana nawe futhi wenze impumelelo!